Sida loo Beddelaan MP4 si iPhone (iPhone 5 / 5S mid) p
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MP4 si iPhone (iPhone 5 / 5S mid)
Ma doonaysaa in ay ku raaxaystaan ​​soo bixi MP4 videos on your iPhone cusub oo 5 / 5s on u tegayaa? Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad ku guul darreysato inay ciyaari MP4 on iPhone. Taasi waa sababta oo ah habka ugu Tifaftirayaasha u MP4 video noqon kartaa kala duwan oo dhib badan. iPhone aqoonsan karaa oo keliya file la .M4V, .MP4, iyo .MOV kordhin jidkuna waa in H.264 ama MPEG-4 . Haddii file MP4 aad aan Tifaftirayaasha sidan, la furi karo ama si habsami leh u ciyaaray aad iPhone 4 / iPhone 4s. Waxaad u baahan tahay in ay marka hore iyaga loogu badalo in ay iPhone qaab socon. Halkan, si weyn lagu talinayaa MP4 si iPhone Video Converter.
Beddelaan MP4 si iPhone Qaabka socon for Mac / Windows (Windows 10 ka mid ah)
• Beddelaan video in qaab kasta, sida AVI, MP4, MOV, MKV, iwm
• U beddelaan qalabka Apple oo Android kala duwan, Pro cut Final iyo iMovie, la presets filaayo.
• Habee video by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan ama saamaynta, iwm
• Add comment, sharaxaad, jilaa ama magaca Agaasimaha aad video on toos ah.
• Shaqo ee 30 X xawaaraha si dhakhso ah oo aanay la AAN qualilty khasaaro.
Beddelaan MP4 si iPhone
kaliya Waxaad sameyn kartaa in aad iPhone sida qaab saarka withput fekerayo qaabka gaar ah ama codec oo ay taageerayaan aad iPhone, aad badbaadinayo dhibaato badan.
Waxaad jiidi karaan jeedi multimedia kasta oo galay video Converter, waayo, iPhone, ka dibna Dufcaddii iyaga loogu badalo in ay qaab aad u jeclaystay.
doonaysaa in ay sameeyaan filim aad soo bixi raadinaya sida kuwa iibsiga ka Lugood? Codsigan si fudud waxa ay ka dhigi karaan. Waa ku dari kartaa film dabool, comment, sharaxaad, iwm, si aad video.
Waxaad ka ciyaari kara talantigaagii in cuctomize aad video la saamaynta kala duwan, ama aad jar karo, noola aad video iyo dar Cinwaan waa in.
Sida loo Beddelaan MP4 si iPhone (iPhone 6S (Plus) / 6 ka mid) ee Radidiyaha
1. file Import (s) in software this
Burcad video Converter this. Guji "Add Files" iyo dajiyaan videos aad rabto in aad si loogu badalo ama si toos ah jiidi & iyaga iska barnaamijka. Diinta Dufcaddii waxaa lagu taageeray. Waxaad ku dari kartaa files ka badan hal mar.
Riix icon Qaabka ugu hooseysa ee ay leeg- this app ee in la furo suuqa kala saarka. Dooranaysaa iPhone (iPhone 6S / 6 / 5s / 5/4 / 4s) ka Qalabka category.
Talooyin: barnaamijkan sidoo kale siisaa hawlaha tafatirka kaas oo awood kuu inuu wax ka beddelo saarka video. Qalabka tafatirka Common waxaa la siiyaa: falinjeeerka, lana siii, qabsiga video, watermark, iyo subtitles (guji ah "Edit" button image dhinaca gacanta midigta ee Qaabka).
3. Start MP4 in ay diinta ka iPhone
Riix badhanka image Beddelaan si aad u bilowdo diinta. Markaasay aad ugu dhakhsaha badan ay u ciyaari doono aad MP4 aad 6s iPhone cusub ama tusaalayaal kale oo iPhone.
Marka dhan laga badalay dhameystirtay, ee la gediyay videos si toos ah kuugu dari doonaa iTurnes haddii aad samaysay seting: Gal si aad rabtid> Beddelaan> dar files si Lugood Library ka dib markii convertion . Iyaga u hagaagsan in aad 6s iPhone / iPhone 6, ka dibna ay awoodaan in ay mar walba iyaga u ciyaaro, meel kasta oo aad tahay. Fadlan ku raaxaysan!
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan MP4 si iPhone (iPhone 6s / 6 ka mid)
Hab kale oo ka fudud yahay si loogu badalo videos la this video online Converter oo lacag la'aan ah . Just leeyihiin isku day ah.
Sida loo Beddelaan wmv in MOV (Quicktime) aan Loss Tayada ee Mac / Win